Ukwakhiwa kwezindlu kusukela Amabha profiled kuyinto ubuchwepheshe eziningi zalezi zinsuku sezihambile emkhakheni bokwakha lokhuni. Kungcono zokwakha ngaphandle laminated ukhuni uginindela, kodwa abekho. Log kumakhabheni etholakala kuwo i ijamo ekahle yejeyomethri, sibe namandla ngokuqina. Kodwa okubaluleke ngokulinganayo liwumhlobiso angaphakathi izindlu kusuka ibha. Akubuzwa ukuthi okuyizona impahla yokuqedela emaqaqasini uzimele sokhuni ukuba ukhuni? Ngenhlanhla, kukhona inala ongakhetha lapha.
Interior umhlobiso kwezindlu eyenziwe ugodo. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye ukuncipha
Kukhona sici ebaluleke kakhulu ohlakeni lokhuni, okuyinto esiyisibopho kufanele ucatshangelwe lapho esikhiqiza yimuphi umsebenzi nohlelo lwayo umhlobiso. Sikhuluma inqubo ukuncipha, okuyinto nakanjani kwenzeka noma isiphi isakhiwo sokhuni isikhathi esingangonyaka ngemuva kokuphothulwa ukwakhiwa yayo. Ukuphakama isidumbu sancipha ngamaphesenti angaba 5-7%. I yangaphakathi umhlobiso kwezindlu izingodo kufanele lwenziwe kuphela ngemva ukuncipha. Ukwehluleka ukulandela lo mthetho elula nakanjani kuyoholela ekubhujisweni futhi ukusonteka Udonga yokuqedela panel kanye izakhi okuhlobisa. Ngenxa yalokho, imali echithwa ku ukuthengwa izinto zokwakha kanye kukhiqizwe yemisebenzi, kungaba kubhekwe alahlekile.
Ezindlini ezenziwe imithi. Finishing endlini
Indaba eliphezulu umhlobiso angaphakathi indlu yamapulangwe kuyinto ulwelwesi. Izixazululo, ngokusekelwe ukusetshenziswa kwaso, kukhona ezihlukahlukene, kusukela kuphela ukonga. On wonke uhla izimfanelo zayo zemvelo kanye izakhiwo kwezemvelo lokhuni odongeni asezindongeni is esingenakuqhathaniswa. Futhi wezangaphakathi sokhuni indlu nakanjani okokusebenza kakhulu eziphilayo. Interior umhlobiso kwezindlu kusuka ibha ne izinkuni ulwelwesi, phakathi kwezinye izinto, kuzuzisa ngokwengeziwe imingcele luyingxenye kwezomnotho. Labo baye bacubungula izindleko kuphela ehlukene, baye baphoqeleka ukuba lafinyelela kulesi siphetho ngemva nokumadanisa amabhajethi kubulawa izinguqulo ezihlukahlukene. Ngaphezu izindleko ngamunye imitha square, lapha kufanele acabangele yokuthi ulwelwesi kakhulu bebakhulu UKUQINA okunye inotiyela izinto. Kungenzeka ukuthi wake izinga sekugcineni yendlu ngokhuni kusuka ibha ngosizo zalo esikhathini esizayo ngeke zidinga noma yikuphi ukulungiswa. Ngokuvamile kwenziwa unomphela futhi azigcina impahla yayo imi endlini wokhuni.
Yiqiniso, ulwelwesi - akusiwona kuphela ukwaziswa kokuphothula. Kungaba kokubili ngokuphelele ukuqeda, futhi kuhlangene nezinye izakhi okuhlobisa. Ayikho nemikhawuko ethile ayikho lapha. Futhi uma kukhona, it is nje kungagcini ngendlela umklami yokucabanga kanye izintandokazi ngazinye ikhasimende. Nokho, ukuthi noma isiphi isinqumo kumele acabangele ukuncipha we ohlakeni lokhuni. Haste ngokuphelele okungalungile.
Ikhebula Ukungena: inhloso, sakhiwo, kwezinhlobo
Izinto zokuvala umoya "Knauf" (Knauf): Ukucaciswa kanye nokubuyekeza
Ingxube lembuthuma - umsizi okuthembekile ekwakhiweni amaziko kanye fireplaces
Uniflex - kuyini? Isabelo, izici, izici isicelo impahla
Andrei Panin: imbangela yokufa umlingisi
Ibhokisi "Kiss": umlando, i-discography, isithombe
LIH umzabalazo kuyinkimbinkimbi lwamabutho coalitions ezahlukene
Izinsika noma ulwa adonsela phansi.
Ukwelashwa kwezifo eziningi ngezinyosi
Toyota Aristo: incazelo kanye Ukucaciswa